Toriteny Alahady 04 Aogositra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 04 Aogositra 2013
« Manantena fandrosoana ny mino »
Ohabolana 3 : 19 – 26 / Lioka 5 : 1 – 11 / I Koritiana 14 : 12 – 19
Ahoana no tokony ho fiainan’izany Kristiana manantena fandrosoana izany ?
1- Manaraka ny Tenin’i Jesoa
Cf and 5: Na dia tsy tamin’ny faharesen-dahatra aza no naneken’I Peter any handatsaka ny harato dia nataony ihany izany noho ny amin’ny Tenin’I Jesoa. Vokatr’izany anefa dia nahita fahombiazana be izy. Isika koa dia misy ny fotoana tsy mampahomby antsika amin’ny asa atao na fianarana , ny antony dia satria ny fandrosoana amin’ny maha olombelona no ianteherantsika , raha te hahomby sy handroso isika, dia tsy maintsy manontany ka manaraka izay atoron’I Jesoa. Fantaro fa hain’i Jesoa amin’ny antsipiriany ny momba anao , ny asanao , eny na dia ny fikasana te hivelatra sy hampandroso izany koa aza. Mba ahahatanteraka izany dia meteza hanatona an’I Jesoa ka hanaraka tsy misy fepetra ny toro hevitra izay ambarany aminao.
Izao tontolo izao no mampikatso ny Kristiana tsy handroso ; fa izay manaraka ny tenin’I Jesoa Kristy kosa dia itobahan’ny fitahiana manana amby ampy ka manana ho zaraina amin’ny hafa.
2- Miaiky ny tsy fahamendrehana
Cf and 8: Tamin’ity tantara ity; raha nahita fahombiaza Petera dia nahatsapa avy hatrany fa tsinontsinona izy “Tompoko , mialà amiko fa olo-meloka aho” . Manoloana izay fitahiana sy fahasoavana noraisintsika avy amin’Andriamanitra , dia mila manetry tena isika ka mitodika amin’Andriamanitra hiteny fa tsy mendrika akory ny hisalotra na handray akory izany fahasoavana atobak’Andriamanitra izany. Tadiavina amin’ny Krsitiana ny fiainana feno fanetren-tena toa an’I Jesoa Kristy , tsy ho amin’ny fireharehana . Aoka isika tsy hirehareha fa ny fivavahantsika tsy mitodika amin’ny tenantsika fa mitodika amin’Andriamanitra ; izany hoe mahaiza misaotra amin’ny zavatra rehetra.
3- Mahafoy ny fananany rehetra ka hanaraka an’i Jesoa
Cf and11 : Tsy nandà i Petera raha tao anaty sambo fanaratoany I esoa no nitory teny . Vokany : fahombiazana no azony ary mbola nambaran’I Jesoa fa ho mpiara-miasa Aminy koa Petera ; ho lasa mpanarato olona . Aoka isika mba hahafoy ho an’Andriamanitra ka tsy ny ampahany ihany toy ny ampahafolon-karena fotsiny ; fa ny tenantsika manontolo sy ny mahakasika izany dia mba atolotra ho an’ny asan’Andriamanitra . Atolotro ho an’Andriamanitra ny tenako noho ny fitahiana azoko dia hisokatra ho ahy ny varavaran’ny lanitra.
Mandehana ary ka tanteraho izany ; dia hahomby isika ka ho tena Krsitiana mitombo sy mandroso ho amin’ny tanteraka .
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 6 août 2013